ဥပုသ်တစ်ကြိမ်သာ စောင့်ခဲ့ဖူးသော ကျွန်မလေးအကြောင်း - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Chong Li, Taiwan R.O.C
Main 首頁 မူလနေရာ
My Page 我頁 ကိုယ့်စာ
Members 會員 အဖွဲ့ဝင်များ
Photos 圖片 ဓါတ်ပုံများ
Videos 電影 ရုပ်သံများ
Blogs 部落格 ဖတ်စရာများ
Forum 論壇 အထူးကဏ္ဍ
ဥပုသ်တစ်ကြိမ်သာ စောင့်ခဲ့ဖူးသော ကျွန်မလေးအကြောင်း
Posted by ukkmaung on December 17, 2014 at 1:00pm
"ဥပုသ်တစ်ကြိမ်သာ စောင့်ခဲ့ဖူးသော ကျွန်မလေးအကြောင်း"
အဲဒီဘ၀တုန်းက ပဒုမုတ္တရဘုရားလက်ထက်မှာ သူက ကျွန်မ။ အဲဒီမြို့ တော်က သူဌေးအိမ်မှာ သူက ကျွန်မ။ နေ့ တိုင်းတော့ဖြင့် သူဌေးကလည်း မနက်လင်းမှမလင်းသေးဘူး၊ ငွေရစရာရှိတာ ဘယ်မှာ ဘယ်လောက်ရမယ်၊ ညာမှာ ဘယ်လောက်ရမယ်၊ ဘာက ဘယ်လိုနဲ့ ၊ အဲဒီနေ့ ကျတော့ ဆိတ်လို့ ။
မနက် ၅ နာရီလောက်တည်းက ဥပုသ်ယူထားမှာကိုး ။
သူဌေးကတော်ကလည်း နေ့ တိုင်းတော့ဖြင့် ဟိုသားမကောင်းဘူး၊ ဒီသားမကောင်းဘူး။ ဟိုဟာ ၀ယ်လာတာ ဘယ့်နှယ်။ ဒီအသားကြီးက မလတ်ဘူးနဲ့ ၊ အဲဒီနေ့ ကျ တိတ်လို့ ၊ ရှိတာလေးနဲ့ချက်တယ်။
သူဌေးသမီးကလည်း နေ့ တိုင်းဆိုရင်တော့ ဘယ်အ၀တ် ၀တ်ရမှ၊ ညာအ၀တ် ၀တ်ရမှ၊ ဘယ်အဆင်မှနဲ့ ၊ အဲဒီနေ့ဘာမှမပြောဘူး။ သူဌေးသားကလည်း နေ့ တိုင်းဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ပေးမှ၊ ဘာက ဘယ်လောက် ပေးမှနဲ့ ။ အဲဒါတောင် အဲဒီနေ့ဘာမှမပြောဘူး။ အဲဒါနဲ့ဘုရားကျောင်းသွားကြတယ်။ ကျွန်မလေး ကျန်နေရစ်တယ်။ ကျွန်မလေ ကျွန်အလုပ်လုပ်ရတာ။ မစောင့်နိုင်ဘူး။
သို့ သော် သူကတွေးတယ်။ နေ့ တိုင်း သူဌေးကြီးက ငွေစကား ကြေးစကား သိပ်ပြောတာ၊ ဒီကနေ့ ငွေစကား ကြေးစကား မပြောဘဲနဲ့ ဆိတ်ဆိတ်နေတာ သူတို့ ဥပုသ်က ငွေထက်လည်း သာလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ တွေးတာနော်။
နေ့ တိုင်း သူဌေးကတော်ကြီးက ဘယ်အသားက ဘယ်လို၊ ဘယ်ဟာက ဘယ်နှယ်နဲ့ဒီကနေ့ဘာမှမပြောရင် သူတို့ ဥပုသ်က ဟင်းထက်လည်း ကောင်းမယ်နဲ့ တူတယ်။ သူဌေးသားလည်း နေ့ တိုင်း သုံးဖို့ ဖြုန်းဖို့ ဘာဘယ်လောက်ရမှ၊ ညာဘယ်လောက်ရမှနဲ့ဒီကနေ့ ဘာမှ မပြောရင် သူတို့ ဥပုသ်က အပျော်အပါးထက်လည်း ကောင်းတယ်နဲ့ တူတယ်။
နေ့ တိုင်းတော့ သူဌေးသမီးက ဘယ်လို အဆင်လေး ၀တ်ရမှ၊ ညာလို အဆင်လေး ၀တ်ရမှနဲ့ ဒီကနေ့ ဘာမှမပြောတော့ သူတို့ ဥပုသ်က အ၀တ်အစားထက်လည်း ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မ ဒီလောက်သိမှာပေါ့။ ဒါထက်ပို မသိပါဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ လောက် ဗဟုသုတ မရှိပါဘူး။
အဲတော့ သူတို့ သူဌေးတွေတောင် ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာ စွန့် သေးတာ၊ ငါလည်း ငါစားရမယ့် အစာကို မစားတော့ဘူး။ ဒီကနေ့ အတွက် ဥပုသ်စောင့်တာ ဘယ်လိုမှန်းမှ သူမသိတာ။ သူ့ ရဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ကတော့ သူဌေးကြီး မိသားစု နေသလို နေမယ်တဲ့။ အဲဒါ သူ ဥပုသ်ယူလိုက်တာ။ ဒီကနေ့ အတွက်တော့ သူဌေးကြီးမိသားစု နေသလို နေမယ်၊ ဒါပဲ။
အဲတော့ သူဌေးကြီးတွေက ဘယ်ချိန်စားတယ် သူမသိတော့ သူ့ ဖို့ ချန်ထားခဲ့တာလေးလည်း မစားဖြစ်ဘူး။ သို့ သော် ကျွန် ဗျ။ လုပ်ရတာပဲ၊ လျှော်ချိန်လျှော်၊ ဆေးချိန်ဆေး၊ ရှိသမျှအကုန် သူလုပ်ရတယ်။ ညနေ ဘုရားကျောင်းကနေ အဲဒီသူဌေးမိသားစု ပြန်လာတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေကလည်း ဒီတိုင်းပဲ၊
"နင် မစားသေးဘူးလား ဘာလို့ မစားတာတုန်း"ဆိုတော့
"အရှင်တို့ သူဌေးမိသားစု ဘယ်ချိန်စားတယ်မသိလို့ ကျမ စောင့်နေတာ"တဲ့။
"မဟုတ်ဘူး၊ တို့ က မနက် မွန်းမတည့်ခင်စားတာ အဲဒီ အချိန်စားရတယ်"ဆိုတော့
ဒီလိုဆို "ကျမလည်း ဒီိချိန်မစားတော့ဘူး"တဲ့။ ပင်တော့ ပင်ပန်းနေပြီနော်။ ကျွန် နော်..ကျွန့်အလုပ်တွေ လုပ်ရတယ်။ ပင်ပန်းတော့ ခံနိုင်မလားဗျ။
ညနေကျတော့ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေ ပြာလာရော။ သွားတော့ ဟပ်ထိုးဟပ်ထိုးဖြစ်၊ အဲတော့ သူဌေးကြီးက လှမ်းမြင်တယ်။
"မူးလို့ မော်လို့ ပါ"၊
"ဒီလိုဆို စတုမဓူ စားလိုက်"လို့ ပြောတယ်။
အဲတော့ ကျွန်မ ကမေးတယ်၊ "သူဌေးကြီးတို့ စားပါသလား၊"
"တို့ ဥပုသ်ရတယ်၊ မစားဘူး" ဆိုတော့
"ဒီလိုဆို ကျမ လည်း မစားဘူး"တဲ့။
ဘယ့်နှယ်တုန်း၊ ကျွန်မ ဥပုသ်နော်။ သူဌေးကြီးတို့ နေသလို နေပါ့မယ်လို့ ယူထားတဲ့ ဥပုသ်ကိုး။
"ဒီလိုဆို သမီး အလုပ်မလုပ်နဲ့ တော့ အနားယူတော့"လို့အဲဒီနေ့ ညနေကို ကျွန်အလုပ်တွေကို ပယ်လိုက်တယ်။ သို့ သော် ဝေဒနာပြင်းထန်တဲ့အတွက် ညမှာ သေတာပါပဲ။
ညသေတော့ ဒီဥပုသ်နဲ့ သေတဲ့အတွက် နတ်လမ်း တန်းသွားတာပဲ။ နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီး သွားဖြစ်တယ်။ ဒီဥပုသ်စိတ်နဲ့ အာရုံလုံအောင်ထိန်းလိုက်တာနော်။ စတုမဓူ စားပါဆိုတာတောင် စားသလား၊ ထမင်းစားပါဆိုတာတောင် စားသလား၊ မစားဘူးနော်။ ဒါ သူတတ်နိုင်တာ သူစောင့်တာနော်။ အဲဒါနဲ့ နတ်ပြည်ရောက်သွားတာ၊ အဲဒီကနေ လူနဲ့ နတ်ပဲ သူဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။
ခုနောက်ဆုံးဘ၀မှာ တို့ ဘုရားလက်ထက်မှာ အဲဒီ ဥပုသ် တစ်ကြိမ်သာ စောင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ စေတနာရဲ့ အရှိန်ကြောင့် ဒီမှာ ရဟန္တာမ လာဖြစ်တယ်။ ဧကုပေါသထ ဘိက္ခုနီမ ဆိုပြီး ကျော်ကြားတယ်။ (ထေရီပါဒါန်)
တစ်ကြိမ်ပဲ ဥပုသ်စောင့်ခဲ့ဖူးတာနော်၊ အဲဒါနဲ့ သူ ဒီမှာ ရဟန္တာမ လာဖြစ်တာ။ အာရုံနောက် စိတ်မလိုက်ဘဲ တစ်ကြိမ်တည်းပဲ စောင့်ခဲ့ဖူးတယ်။ တို့ ဘယ်နှခါ ရှိပြီလဲ ဥပုသ်စောင့်တာ၊ တို့လိုသေးတယ်နော်။ ဥပုသ်က အာရုံလုံအောင် စောင့်တာ၊ စိတ်နဲ့ ဆိုင်တယ်။
သီလက ကိုယ်နဲ့ နှုတ်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ အဲတော့ ကိုယ်ရယ်နှုတ်ရယ် စိတ်ရယ်မှာ စိတ်သည် ခေါင်မဟုတ်လားကွဲ့ ။ သတိလေးနဲ့ အာရုံလုံအောင် စောင့်တာ ဥပုသ်စောင့်တာ။ အဲလို ဥပုသ် များများ မဟုတ်ဘူး ၊ တစ်ရက်ပဲ ယူပါ။ နိဗ္ဗာန်ထိအောင် တာဝန်ယူတယ်။
(သရဏဂုံ ဥပုသ်တော်နှင့် သီလရှင်းတမ်း တရားတော်မှ)
You need to beamember of ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺 to add comments!
Join ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ukkmaung created this Ning Network.
ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ဆင်ခြင်ဖွယ် လိုက်နာဖွယ်ရာ သြ၀ါဒ စကားများ
ပြောမှ သိ၊ ထိမှ နာ၊ သာမှ နေ၊ သေမှ ခင်၊ လူတွင် မကျင့်ရာ။
လျော်စွာအကျင့်၊ မဂ်ဖိုလ်ခွင့်၊ ရလင့်ဧကန်သာ။
ရေနှင့်သာ စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောနိုင်သလို
စိတ်နှင့်သာလျှင် စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောနိုင်ပါ၏။
ဓမ္မောဟဝေ ရက္ခတိ ဓမ္မစာရီ
တရားစောင့်သောသူကို တရားကပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပေး၏။ (ဗုဒ္ဓ)
အသက်ရှင်ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက်သက် အတွက်တော့ အသက်ရှင် မနေပါနဲ့။ အများအတွက် သာသနာအတွက် လုပ်စရာတွေ အများကြီးပါ။
သတိယှဉ်တယ် သစ္စာသုံး ဒါမှ အမြတ်ဆုံး။
ကျေးဇူးတရားကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်ပါ၏။
(ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသာသနာပြု အရှင်ဥာဏိက-မြောင်းမြ)
မြန်မာဝက်ဆိုက် ဘလော့များ လမ်းညွှန်
(ပုံပေါ်တွင် နှိပ်၍ မူရင်း နေရာသို့ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။)
မြန်မာ သတင်းစာ ဂျာနယ်များ စုစည်းရာ (၁)
မြန်မာ သတင်းစာ ဂျာနယ်များ စုစည်းရာ (၂)
"မြန်မာစာ မြန်မာစကား "
၀၀၁ နမောတဿ ဘုရားရှိခိုး
Added by ukkmaung
Yatana Vasa Sayadaw dhamma talk.ရတနာဝါသကျောင်း ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသ၏ “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကံကောင်းစေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများ”
Dragon Buddha နဂါးရုံဘုရား
Shin Pyu, Ya Han KHan စုပေါင်း ရှင်ပြု ရဟန်းခံပွဲ (DVD)
Mary Hong posted discussions
NBA Rumors: Victor Oladipo Well prepared In the direction of Acquire Minimal Agreement Towards Sign up for The Lakers
Mailbag: Offseason goals, NBA Draft, and scorching seats
Carmelo Anthony Gives Concept Towards Lakers Lovers: It's Moving Toward Be An Appealing Period.
Mary Hong is nowamember of ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Pyaephyoaung is nowamember of ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
oplihon posted blog posts
Position the Roster: Nos. 71-74 5th QB And Stability Dance
Dan Hoard Stocks Amazing Tale Above Bengals Proprietor Mike Brown
Exchange Nets Far more Pick out, Within just Linebacker
© 2021 Created by ukkmaung. Powered by